ဘဝမှတ်တိုင်: Network Connections v1.0.6
Android Phone က Incoming & Outgoing Network Connections တွေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမယ်။
သင့် Android Phone မှာ ကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ Apps တွေရှိမှာပါ။ အဲဒီ Apps တွေအများကြီးရှိနေခြင်း ဟာ သင့် ကွန်နက်ရှင် ကို နှေးကွေးစေတဲ့ အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင် အသုံးမပြုဘဲနဲ့ Background မှာ ကွန်နက်ရှင်ကို အသုံးပြုနေတဲ့ Services, Apps တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ အတွက် Network Connections ဆိုတဲ့ App ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းကသတင်းအချက်အလက်တွေကို သင်မသိဘဲနဲ့ ပေးပို့ နေတဲ့ Malware App တွေကို ရှာဖွေရာမှာလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ဒီ App က ကွန်နက်ရှင် တစ်ခုချင်းစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ IP Address, AS Number , Abuse RBL Data, PTR စတာတွေကို စောင့်ကြည့်ပေးမှာပါ။
Network Connections ကို ဖွင့်ပြီးရင် အပေါ်မှာ Current Connections, Connections Log, App Network Log , Settings စတဲ့ Tab တွေကို တွေ့ မြင်ရမှာပါ။ Current Connections မှာ Incoming & Outgoing Connections တွေအားလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ IP Address တွေကို တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ Apps, Services တွေရဲ့ ဒေတာတွေပေးပို့ ရယူတဲ့ ပမာဏ တွေကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်း က သတင်းအချက်အလက်တွေကို ခိုးပြီးပေးပို့ နေတဲ့ Malware တွေကို ရှာရာမှာလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
Connections Log မှာတော့ Live Capture လို့ ခေါ်တဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကို လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Apps, Services တွေကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ Live Capture Mode ကို On/ Off လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Most Active, Last Seen, Package Name စသဖြင့် လည်း စီ ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Item တစ်ခုကို နှိပ်ကြည့်ရင် IP Geolocation ကို Google Maps မှာဖော်ပြပေးပါမယ်။ ကွန်နက်ရှင်ရဲ့ Port Number , IP Administrative Data စတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းသိနိုင်ပါတယ်။
App Network Log မှာ App တွေရဲ့ Network အသုံးပြုမှုတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ App တစ်ခုကိုနှိပ်ကြည့်ရင် App ကအသုံးပြုတဲ့ IP Address, Permission တွေကို အသေးစိတ်သိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ခိုးပြီးပေးပို့ နေတဲ့ Malware တွေကို ရှာဖွေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။
Settings မှာ Hidden Apps တွေက ကွန်နက်ရှင် ကို အသုံးပြုရင် သင့်ကို သတိပေးဖို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Apk File Size 449 KB လေးပဲရှိပြီး
Android OS Version 2.1 နှင့်အထက် ရှိထားသော ဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြု
ပေးထားသော လင့်ခ် ကို Click နှိပ်ပါ။
၅ စက္ကန့်မျှ စောင့်ပေးပြီး ညာဘက်အပေါ်ထိပ်
ဒေါင့်နားက ပေါ်လာတဲ့ အဝါရောင် စာသား
လေးနှင့် "SKIP AD" ဆိုတာကို ထပ်မံ၍
Click နှိပ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ ဒေါင်းလုပ် ရယူရမည့် ဆိုဒ် သို့ရောက်ရှိပါမည်
Network Connections Description;;
-Powerful tool that displays and monitors (tracks) all inbound and outbound connection from and to your Android device. A low-level connections capture module ensures best performance withaminimal battery usage. Works on NO ROOT phones too.
(Credit To "ဆော့ဖ်ဝဲမြို့တော်")
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/30/2013 09:51:00 pm